Interior Design – Trend.com.mm
နေအိမ်သေးသေးလေးမှာပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့နေသွားချင်သူများအတွက် အိမ်ဒီဇိုင်းကာလများ
Posted on May 11, 2018 by Wint
တစ်ချို့ ကရှိတယ်.. အိမ်အကြီးကြီး ၊ ခြံအကြီးကြီးတွေမှမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာအေးအေးဆေးဆေး နေအိမ်အသေးလေးမှာပဲ သူ့ဘာသာသိုသိုသိပ်သိပ်နဲ့ နေရတာကိုကြိုက်သူတွေရှိပါတယ်။ အိမ်ကသေးတာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Interior Design, LifestyleLeaveaComment on နေအိမ်သေးသေးလေးမှာပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့နေသွားချင်သူများအတွက် အိမ်ဒီဇိုင်းကာလများ
Posted on March 29, 2018 March 29, 2018 by Noel
ညအိပ်မီးကိုမှ ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းမိုက်မိုက်လေးလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် ပူဖောင်းကိုသုံးပြီး ညအိပ်မီးလေးကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပုံကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ငွေကုန်ကြေးကျလည်းသက်သာပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာဖြစ်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေရစေမှာပါ။ကဲ မြန်မြန်လေးဖန်တီးလိုက်တော့နော်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Interior Design, LifestyleLeaveaComment on ကိုယ်တိုင် ညအိပ်မီးဒီဇိုင်းဆန်းလေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုသူတွေအတွက်…
အသုံးမဝင်တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို အသုံးဝင်အောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်ကြမလဲ?
Posted on November 28, 2017 by Wint
မလိုအပ်တော့ဘူးထင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လွှင့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ပစ္စည်းတွေကသုံးတတ်ရင် အခြားနေရာတွေမှာ အသုံးဝင်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဝက်အူချောင်းကင် အမိုက်စားပြင်ဆင်မှုနဲ့ ဘားကောင်တာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Interior Design, LifestyleLeaveaComment on အသုံးမဝင်တော့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို အသုံးဝင်အောင် ဘယ်လိုပြန်လုပ်ကြမလဲ?
Posted on November 20, 2017 by Wint
ဒီနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး ဗိသုကာ ပညာရှင် Klein Dytham ဖန်တီးထားတဲ့ Gallery TOTO ! တစ်နှစ်ပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Interior Design, LifestyleLeaveaComment on TOTO ကုမ္ပဏီမှ အသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ ၂ဝ၁၇ရဲ့အကောင်းဆုံး အိမ်သာဒီဇိုင်း
Posted on September 6, 2017 by Wint
အိမ်အတွင်းပိုင်းပုံစံပြောင်းချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းရမှန်းမသိတဲ့လူတွေ အတွက် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေက ပြောင်းလဲပုံနည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ နံရံ သင့်ရဲ့နံရံကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Interior Design, LifestyleLeaveaComment on အိမ်အတွင်းပိုင်းပုံစံပြောင်းလဲချင်တဲ့သူတွေအတွက် အိမ်ပုံစံဒီဇိုင်းများ
Posted on September 1, 2017 by Wint
သေးငယ်လှပပြီး စတိုလ်ကျတဲ့အိမ်အသေးလေးတွေကို သဘောကျသူတွေနဲ့ ဒီအိမ်ပန်းရောင်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအိမ်သေးလေးတွေကိုတွေ့ရင် သင်တို့အနေနဲ့ မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးစရာ ရှိလာမယ်။ ဒီအိမ်အသေးလေးထဲမှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Interior Design, LifestyleLeaveaComment on (၁၆ဝ)စတုရန်းပေသာရှိတဲ့ ပန်းရောင်အိမ်လေးရဲ့အံ့သြစရာအတွင်းပိုင်း ပြင်ဆင်မှု